ကလူ - - Tele RELAY တစ်ခု Tekashi 6ix9ine သက်သေခံများအတွက် "တခုတ်တရလူ" ဖြစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် testifying ဘို့သိသိသာသာလူကို "" Tekashi 6ix9ine သည့်ဖြစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ "- လူတွေ
Tekashi 6ix9ine "လက်ညှိုးညွှန်" သငျ့လအတွင်းစွပ်စွဲဇူလိုင်လ 2018 အတွက်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်လုယက်ခဲ့သူတဦးတည်းအပါအဝင်ဟောင်းသံသယဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်များ, သံသယရှိ။ ဒါပေမဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ရက်ပ်, သူနဲ့သူ့မိသားစုကိုလက်စားချေ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာကြောင်းအလွန်ကြောက်ဖြစ်ပါသည် TMZ ကတင်ပြထားပါတယ် .
သက်တန့်ကောင်းကင်ပြာဆံပင်လူမှုမီဒီယာပြီးစီးခဲ့လျက်ရှိသည်နှင့်အတူနောက်ဆုံးတွင်ရက်ပ်ကိုဖယ်ရှားသောကျယ်ပြန့်ဖက်ဒရယ်ရက်ကက်ကိစ္စတွင်; အဆိုပါအမှု၌နှစ်ခုကျန်ရှိသောတရားခံများအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးစက်တင်ဘာလ9အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတရားခွင်ဂိုဏ်းကိုး trey Gangsta အသွေးအတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်ထုတ်ဖေါ်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်, ထိုရက်ပ်သူ 2017 အတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးကပြောပါတယ် ။ အစီရင်ခံရှုပ်ထွေးသော ။ ဂျက်ဖရီအက်စ် Berman, နယူးယောက်၏တောင်ပိုင်းခရိုင်များအတွက်အမေရိကန်ရှေ့နေ, အဆိုပါဂိုဏ်းကပြောပါတယ် "cheeky အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များမြားတှငျပါဝငျခွငျး, New York မှာဖျက်ဆီး wreaked ခဲ့" ။
ထိုကြောင့်သမိုင်း၏ Tekashi သူ့ကို "အသက်အဘို့အသိသိသာသာလူ" လုပ်သူကထောင်ထဲမှာစော်ကားခံရနိုင်ကြောင်းမယ်လို့သက်သေခံကိုကွောကျရှံ့, TMZ ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘရွတ်ကလင်းမှာမွေးဖွားအဆိုပါရက်ပ်, ထို့အပြင်သူမ၏မိခင်နှင့်အစ်ကိုဦးဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုကြောက်ရွံ့။ ဒါဟာပြီးသားသူမ၏မိခင်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေးဆောင်ထားပြီး, TMZ ကဆိုသည်။
အဘယ်သူ၏အမည်ရင်းကိုဒံယလေဟာနန်ဒက်ဇ်ဖြစ်ပါတယ် Teskashi, အပြစ်ရှိကြောင်း ဇန်နဝါရီလအတွင်းရက်ကက်, လက်နက်နှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအများအပြားစွဲချက်။ ကိုး trey Gangsta အသွေးဂိုဏ်းခေါ်ခဲ့ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြတဲ့သူအာဏာပိုင်များနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးဖျောဖက်ဒရယ်စက်ရုံအတွက်ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
Tekashi ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာဘဝမှာထောင်ချဖို့ 47 နှစ်ပေါင်းထောင်ဒဏ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေနိမ့်ဆုံးမှဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူ၏အသနားခံသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာသူဇန်နဝါရီလလအတွက်ကြီးကြပ်လွှတ်ပေးရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်ပါတယ်; ကဇန်နဝါရီလ 24 အတွက်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ် ထို့ကြောင့်အစီရင်ခံ Sound .
Tekashi အပြစ်ရှိကြောင်းတဲ့သူကိုး trey ၏ 10 စွပ်စွဲချက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ TMZ အဆိုအရစွပ်စွဲခံရသူတွေထဲကနေဆဲစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က Tekashi ၏ယခင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအန်သိုနီ, "Harv" အီလီဆန်သည်။
"Gummo" ၏အဆိုတော်မောင်းထုတ်ရန်သူ့ကိုအတင်းအကျပ်, အီလီဆန်ဇူလိုင်လ 22 2018 အတွက်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သက်သေခံသင့်တယ်, ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရတနာထိုက်တန်ရာပေါင်းများစွာကိုခိုးယူရှေ့မှာထိုသူကိုမောင်းများနှင့်တိုက်ခိုက် သည်အတိုင်း Complex မှ အဆိုပါအမှု၌တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများကို ကိုးကား. ။
Tekashi လည်းစာရွက်စာတမ်းလည်း Kifano "Shotti" ယော်ဒန်မြစ်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဂိုဏ်း၌သူ၏စွပ်စွဲချက်အပေါင်းအသင်းများထဲမှပြောထားသည်ကြောင်းသက်သေခံသင့်တယ်, သူက "အီလီဆန်လုပ်ကြံရန်မယ်လို့သူမည်သူမဆိုမှ 50 000 ဒေါ်လာပေးဆောင်လိမ့်မယ်။ "
အီလီဆန် Tekashi ဖယ်ရှားငြင်းဆို; Deveraux Cannick, ရှေ့နေအီလီဆန်သူ Tekashi ပြန်ပေးဆွဲဖွဲ့စည်းကြောင်းငြင်းခုန်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်, အစီရင်ခံရှုပ်ထွေးသော .
"အဘယ်သူမျှမလုယူခြင်း, ပြန်ပေးဆွဲသို့မဟုတ်ချေမှုန်းရေးဖြစ်ပွားခဲ့သည်" Cannick ကြားနာပြီးနောက်ကဆိုသည်။ မန်ဟက်တန်အတွက်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က။ "ဒါဟာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။
Cannick လည်း Tekashi ကြော်ငြာများအတွက်ပြန်ပေးဆွဲဖွဲ့စည်းကြအံ့သောငှါကသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။
"သူတစ်အယ်လ်ဘမ် drop အကြောင်းခဲ့တယ်" ဟုအဆိုပါ 23 နိုဝင်ဘာလထားခဲ့ဖို့သူ "Dummy Boy" ရည်ညွှန်းကိုးကားနိုင်ကြောင်း Cannick ကဆိုသည်။ သူကအခြားအယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိဖို့အကြောင်းအခါတိုင်း "ဒါဟာ trolls ။ ငါသည်သင်တို့၏ buzz ရှိရမည်။ ဒါဟာသင်ငွေရှာဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ "
"Tekashi နောက်ကွယ်မှကနေစျေးကွက်၏အနုပညာကျွမ်းကျင်နှင့်, ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံး, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမရှိခြင်းဘို့ဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါရှေ့နေကဆက်ပြောသည်။
ရက်ပ်အသနားခံဇန်နဝါရီလအတွင်းကြားနာသည့်အခါတရားသူကြီးရှင်ပေါလု Engelmayer သူသည်မိမိအစီရင်ချက်ချပြီးနောက်ကြီးကြပ်လွှတ်ပေးရန်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်နိုင်ပါတယ် Tekashi ပြောပေမယ့်သူကမဆိုကတိတော်များကိုစေနိုင်ဘူး, အဆိုအရ ကြားနာတဲ့မှတ်တမ်း ။ တရားသူကြီးတစ်ဦး Pre-ဝါကျအစီရင်ခံစာ၏တွေ့ရှိချက်များပေါ်တွင်မူတည်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
Tekashi သူ 2017 ကျဆုံးခြင်းအတွက်ကိုး trey အသွေးအားပူးပေါင်း Engelmayer အတွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သူလည်းဂိုဏ်းနှင့်အတူ၎င်း၏အနေအထားကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားရန်ဂိုဏ်းကူညီပေးနေဝန်ခံခဲ့သည်။ Tekashi လည်းပြိုင်ဘက်အကြီးအကဲ Keef ရိုက်ကူးဖို့တွဲဖက်ပေးဆောင်ဘဲလျက်ဝန်ခံ; သူကတစ်ဦးလုယက်မှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့; သူဘိန်းဖြူရောင်းဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။
"ငါတရားရုံးမဆိုဒဏ်ရာရသူလူတစ်ဦး, ငါ့မိသားစု, ငါ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ငါဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအဘို့ငါကျဆင်းသွားသောငါ၏ပရိတ်သတ်တွေတောင်းပန်," Tekashi သည်သူ၏အသနားခံကပြောသည်။ 19659018]
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူ Meghan Markle နှင့်မင်းသမီးဒိုင်ယာနာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပေသည်ရှိမရှိထုတ်ဖော်ပြသ